बासुदेब मुनालका लागी चुरोट किन्न हिडेका सुरेश अधिकारी चुरोट नै नल्याइ फरार ? | KTM Khabar
२०७२ माघ २१ गते ०८:१७ मा प्रकाशित
काठमाण्डौँ - नेपाली संगित आकाशमा एउटा सिद्धहस्त नाम हो सरेश अधिकारी । म मरेको पल तिमी डोली चढ्नु, मुग्लिन पारी तरेर गण्डकी, झरनाको चिसो पानी, चौबन्दिमा पटुकि, दर्शन नमस्ते, एक धर्को सिन्दुर जस्ता सयौ गित संगितहरुले नेपाली सांगितीक जगतमा सुरेशले अग्लो परिचय बनाएका छन् । संगितमा श्रृंगार भर्दै जीबनको मिठास खोजिरहेका अधिकारीको जीबन लीला बारे उनको मुखारबिन्दबाट सुनिरहदा चलचित्रका दृश्य झै उनका जीबन खुड्कीलाहरु दृश्यानुभुत गर्न सक्छन जोसुकैले पनी ।
काभ्रेको कुसादेबीमा जन्मिएका सुरेशले आफु अलिकती जान्ने भए देखि नै संगितको संगत छाडेका छैनन् । उनका बुबा राजनितीमा क्रियासिल थिए, त्यसबेला घरमा रेडियो हुनेको ठुलो इज्जत हुन्थ्यो, उनको घरमा रेडियो थियो । बुबा बाहिर फेर जाने भएकाले रेडियो सुरेशको हातमा हुन्थ्यो । उनी रेडियो संग यसरी झुम्मिन्थे मानौ बिणाको धुनमा सर्प पनी त्यसरी झुम्मिदैन । बिहान देखी बेलुकासम्म रेडियो नेपालमा कुन कुन कार्यक्रम आउथ्यो ? कसले कार्यक्रम चलाउथे ? कस्ता गित बज्थे त्यो सबै उनी अहिले पनी खरर सुनाउछन् । दिउसो रेडियो नेपालको प्रसारण बन्द हुदा त्यो समय उनका लागी निकै कष्ठकर बन्थ्यो । साथिसंग खेल्न पनी उनी रेडियो बन्द भएको बेलामा मात्र जान्थे । संगितको सुरमा उनी यसरी पागल भएका थिएकी रेडियोमा गित गाउनेहरु, रेडियोमा बोल्नेहरु देवता जस्ता लाग्थे उनलाई । कस्ता देवताहरु त्यसभित्र बस्छन भन्ने जिज्ञाशाले कती वटा रेडियो खेलेर बिगारेका सम्झनाहरु अहिले पनी ताजै छन् उनका मानसपटलमा । रेडियो सुनेका गित र समाचारहरु हुबहु सुनाउथे उनी । बिद्यालयले आयोजना गर्ने हरेक जसो कार्यक्रमा सहभागी हुने उनले दोश्रो हुनुपरेको सम्झना छैन उनी सधै प्रथम हुन्थे ।
गित गाउनमा होस् या नाटक देखाउन सबैमा खप्पिस उनी साथीसंगी, शिक्षक र समाज सबैका प्रिय थिए । रेडियो नेपाल नै उनको लागी त्यस्तो ठाउ बन्यो जसको जगमा उनले आफ्नो आजको जीबनघर बनाएका छन् । त्यती खेर रेडियो नेपाल सुन्न नपाएको भए आफ्नो जीबनमा धेरै फरक पथ्र्यो जस्तो लाग्छ उनलाई । सबै मान्छेहरुमा प्रतिभा भएर पनी सहि प्लेटफर्म नपाउदा ती प्रतिभाहरु मरिरहेको उनको बुझाइ छ ।
एकपटक उनले रेडियो नेपालमा प्रतियोगितात्मक बाल गित सम्मेलन बारे सुचना सुने जतिखेर उनको उमेर मात्र ८ बर्षको थियो । त्यो प्रतियोगितामा भाग लिन उनी भागेर काठमाण्डौँ आए त्यस बखत उनका प्रिय कार्यक्रम संचालक थिए बासुदेब मुनाल, जसले बाल कार्यक्रम चलाउथे । बासुदेब मुनाललार्ई उनले त्यहि भेटे । उनले प्रतियोगिताकाको लागि गित रेकर्ड गराए जुन आधुनिक गित थियो भने प्रतियोगिता लोक गित प्रतियोगिता थियो । उनको गित भएन भनेर रेडियो नेपालका कर्मचारीहरुले पठाइ दिए । उनी निराश भएर फर्कदै गर्दा उनका प्रिय कार्यक्रम संचालक बासुदेब मुनालले उनलाई देखेर बोलाए अनी उनको गितलाई लोक लयमा कम्पोज गरिदिए । उनले सो गित फेरी गाए । अन्तत त्यहि गित प्रतियोगितामा प्रथम भयो । उनी पुरस्कार लिन काठमाण्डौैँ आए सो पुरस्कार ४० रुपैया राशिको थियो । त्यति खेर १० पैसामा टन्न खाजा आउथ्यो । बासुदेब मुनालले उनलाई सोधे प्रथम भए पछि अब मलाई के पार्टी दिन्छौ त ? सुरेशले तत्काल सोधे सर के खानु हु न्छ त ? मुनालले याक चुरोट खान्छु भने पछि उनी याक चुरोटको खोजिमा लागे तर सिंहदरबारको क्यान्टिनमा याक चुरोट पाउन सकेनन् । त्यस पछि बाहिरबाट चुरोट ल्याएर खुुवाउछु भनेर उनी गेटमा मात्र के पुगेका थिए, धुलीखेलको गाडी उनको अगाडी आइपुगि हाल्यो त्यसपछि बासुदेब मुनाललाई चुरोट किन्न हिडेका सुरेश गाडी चढेर धुलीखेल पो पुगे ।
त्यस्ता धेरैै रमाइला क्षणहरु छन् उनीसंग । गायक बन्छु भनेर काठमाण्डौँ आएका उनको गायक बन्ने सपना भने गोपाल योञ्जनलाई भेटे पछि मोडियो । गोपाल योञ्जनले उनको क्षमता बारे यसरी सर्जरी गरिदिए कि त्यस पछि उनी राम्रो संगितकार बन्न तर्फ लागे र आजका चर्चित र ब्यस्त संगितकारका रुपमा चिनिन्छन् सुरेश अधिकारी ।
आफुमा भएको क्षमता चिनेर त्यसमा बिचलित नभइ काममा लागि रहने हो भने जो सुकै पनी सफल हुने उनको भनाइ छ । मान्छेले मृत्यु पछिको अस्तित्वको लागि आफ्नो बर्तमान कर्म गर्नु पर्ने उनी ठान्दछन् ।